"Websaydhkan" ama "goobta" waxaa loogu talagalay ujeeddooyin macluumaad ah oo keliya. Websaydhka waa in loo adeegsadaa kaliya shaqsi ahaan, adeegsi aan ganacsi ahayn iyo waxyaabaha ku jira websaydhka, oo ay ku jiraan qoraalka, sawirada, astaamaha, sawirada, maqalka, fiidiyaha, iwm. Waa hantida shabakada waana inaan dib loo soo saarin, lagu wareejin, ama aan loo qaybin iyada oo aan la qorin ogolaansho.
Fadlan ogow inaad kaliya daabacan karto oo aad kala soo bixi karto qaybo ka mid ah waxyaabaha ka jira aagagga kala duwan ee Bogga oo keliya adeegsigaaga aan ganacsiga ahayn iyada oo la oggol yahay inaad oggoshahay inaadan beddelin ama tirtirin wixii xuquuq ah ee lahaanshaha ah ama ogeysiisyada lahaanshaha ah ee agabka. Sidoo kale, waad oggoshahay (adoo galaya boggan) inaad na siiso mid aan gaar u ahayn, oo aan lahayn boqortooyo, adduunka oo dhan, shati weligiis ah, oo leh xaquuqda liisanka-yar, si loo soo saaro, loo qaybiyo, loo gudbiyo, loo abuuro shaqooyin kala duwan, si guud loo soo bandhigo oo aad si guud u fuliso wixii agab ah iyo macluumaad kale ah (oo ay ku jiraan, iyada oo aan xad lahayn, fikradaha ku jira gudaha ee ku saabsan alaabooyinka iyo adeegyada cusub ama la hagaajiyay) aad u gudbiso aagagga dadweynaha ee Goobta (sida looxaanta wargeysyada, shirarka, iyo kooxaha wararka) ama emayl ahaan si kasta oo ay tahay iyo warbaahin kasta oo hadda la yaqaan ama aakhiro horumartay.
In kasta oo aan sameyno dadaal kasta oo aan ku bixinno feylasha fayraska ka caaggan, haddana dammaanad kama qaadaynno feylasha aan kala go'in. Tan ka sokow, waa masuuliyad buuxda oo aan shuruud lahayn oo saaran isticmaalayaasha barta inay qiimeeyaan saxnaanta, dhammaystirka iyo waxtarka dhammaan fikradaha, talooyinka, adeegyada, badeecada iyo macluumaadka kale ee lagu bixiyo adeegga ama internetka guud ahaan. Annagu dammaanad kama qaadaynno, si kasta oo ay doontaba ha noqotee, illaa iyo inta ay doonaan, in adeegyadu ay noqdaan kuwo aan kala go 'lahayn ama aan khalad ka jirin ama ciladaha adeegga la sixi doono. Waad sii fahamtay in dabeecadda saafiga ah ee internetka ay ku jiraan waxyaabo aan sax ahayn oo qaarkood laga yaabo inay cad yihiin ama laga yaabo inay adiga kugu xadgudbaan. Helitaanka agabyada noocan oo kale ah waa mid adiga kuu gaar ah oo khatar buuxda ku jira. Ma xakamayn karno mana aqbalno mas'uuliyad kasta oo agabkan ah.
Dukumintigan siyaasadeed ama dukumiinti kasta ama bogga kale ee shabakada waa la tafatiri karaa (la badali karaa ama la tirtiri karaa, gebi ahaan ama qayb ahaan, iyada oo aan ogeysiis hore la helin) ikhtiyaarkeenna buuxda iyo wixii isbeddello ah ee la sameeyo waxay noqon doonaan kuwo dhaqso leh oo ku xirnaada kuwa hadda jira iyo kuwa mustaqbalka . Waxaan, markaa, ku boorrinaynaa in dhammaan isticmaaleyaasha boggan ay si joogto ah dib ugu eegaan shuruudaha isticmaalka iyo dukumintiyada kale ee siyaasadeed ee ka muuqda websaydhka si ay ula socdaan isbeddelada, haddii ay jiraan. Fadlan la soco in booqashada websaydhka loo qaddarin doono aqbalaadda dhammaystiran ee asalka ama siyaasadda asturnaanta wax laga beddelay ama siyaasadaha kale. Haddii ay dhacdo in soo-booqde goobta uusan rabin inuu ku xirnaado xeerarkan, isaga ama iyadu ma geli karaan ama ma isticmaali karaan goobta.
Adeegsiga Boggan iyo Adeeggu wuxuu muujinayaa inaad aqrisay oo aad oggolaatay Diidmadayada, siyaasadda asturnaanta, shuruudaha isticmaalka, iyo dhammaan dukumiintiyada kale. Xuquuq kasta oo aan si cad loogu bixin halkan waa la keydiyay. Waxyaabaha ku jira bayaankan waa la beddeli karaa wakhti kasta, annaga oo ku tashanno.